Citation Cessna Excel XLS + FSX & P3D / fiaramanidina ailerons tsy miasa tsara
fanontaniana Citation Cessna Excel XLS + FSX & P3D / fiaramanidina ailerons tsy miasa tsara
1 taona 8 volana lasa izay #648 by julian1245
Hello Rikoooo aho, te-hanontany anareo ry zalahy ny amin'izany fiaramanidina. Aho tia fiaramanidina ity any MFSXS ary lehibe izany fa im nahatsikaritra ny olana amin'ny fiaramanidina izay tena manorisory ahy. Izany dia glitch ny ailerons izay rehefa miala tiany spazz avy. Ny fiaramanidina mivily nefa toa nofinofy nirenireny aho raha afaka, misy vintana, manana fijery ary manamboatra azy amin'ny tahaka ny nohavaozina dika na zavatra aho dia tena tia izany raha toa ka manana vahaolana satria im mahafinaritra lehibe amin'ny fiaramanidina. Im tsy azo antoka raha zavatra amin'ny lalao im na manao zavatra tsy mety, rehefa im fametrahana azy io.
Misaotra ampahafantaro ahy raha nahazo misy hevitra.